Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Zimbabwe » Abahambi Basekhaya Manje Bazoshayela Ukubuyiselwa Kwezokuvakasha eZimbabwe
Isithombe sihlonishwa ngu-Leon Basson wase-Pixabay
Ukuvuselelwa kwemboni yezihambi eZimbabwe kuzongena kakhulu emakethe yasekhaya esikhathini esifushane kuya esimaphakathi njengoba izimakethe zomhlaba zisakhula ngemuva kobhubhane lwe-COVID-19.
Ezokuvakasha kanye nokwamukela izihambi kuyizithelo eziphansi zomnotho, okubhekeke ukuthi ukhule ufinyelele ku-US$5 billion ngo-2025 njengoba izwe linikezwe izindawo eziningi ezikhangayo njengeVictoria Falls, enye yeZimangaliso Eziyisikhombisa Zomhlaba.
Kodwa-ke, ukuqubuka kobhubhane lwe-COVID-19 kube nomthelela omubi ekuqhubekeleni phambili okuhlosiwe, kubika i The Herald. Zimbabwe nsuku zonke. Amafemu amaningi e-hospitality athinteke kabi, okubonakala ekwehliseni ukusebenza kwawo kweholo elibikiwe. Ezinye zezikhungo zabo zavalwa isikhashana ngenxa yokwehla kwesidingo esingakaze sibonwe njengoba ubhubhane lwahlasela izwe ngo-2020 ngemikhawulo yokuhamba eyabekwa emhlabeni wonke.
Manje, ababukeli bemakethe bathi imakethe yasekhaya eZimbabwe kufanele isize umkhakha wezokuvakasha futhi iholele ekubuyiseleni kabusha esikhathini esifushane kuya esimaphakathi.
“Umkhakha ubikezelwa ukuthi uzohlala uthulisiwe esikhathini esifushane njengoba isidingo esivela ezimakethe ezinkulu senza inzuzo ekugcineni. Ukuthola kabusha kuzoncika ekuthuthukeni kwezokuvakasha kwasekhaya phakathi nalesi sikhathi, ”kusho abadayisi bamasheya i-IH Securities.
Yize ukusebenza sekukonke engxenyeni yokuqala ka-2021 (1H21) kusalokhu kucindezelekile ngenxa yokuvalwa kabusha kwezwe lonke, kwakungeyona yonke into edabukisayo kanye nobumnyama ngokuhlanganisa amazinga okuhlala kubanikazi bamahhotela abasohlwini akhuphuke afinyelela kumaphesenti angama-24 esikhathini esiyizinyanga eziyisithupha kuya kuJuni 6 uma kuqhathaniswa namaphesenti ayi-2021. ukuhlala kwemboni ngo-19.
Izilinganiso zansuku zonke ezimaphakathi bezisalandela ngo-2019 ku-$91, okubangelwe ukwehla kwebhizinisi langaphandle, elivame ukukhokha ngamanani aphambili. Ngalesi sikhathi, ukuhamba phakathi kwamadolobha kanye nemibuthano yokuzijabulisa kwakungavunyelwe. Ukuhamba phakathi kwamadolobha kuyimbangela enkulu yebhizinisi lenkomfa okunegalelo elikhulu ekukhiqizeni imali. Izinga elimaphakathi lansuku zonke likhule ngamaphesenti angama-24 ukuvala isikhathi kuma-US$8,395, kuyilapho imali engenayo ngegumbi ngalinye elitholakalayo ikhule ngamaphesenti angama-31 yaya ku-US$2,014. Ukuhlala kwegumbi isigamu sonyaka kuya kuSepthemba 30, 2021, bekungamaphesenti angu-12.89.
Ukukhula kuzosekelwa ukwehliswa kwemikhawulo edalwe yi-COVID-19 ngenkathi uhlelo lokugoma lomhlaba wonke kulindeleke ukuthi luqhubeke nokushayela ukuvulwa kabusha kokuhamba komhlaba kanye nokuvakasha kwasekhaya. Ukukhishwa kwezinhlelo zokugoma kanye nokubuyela kwengxenye kokujwayelekile ezimakethe zemithombo ebalulekile njenge-United Kingdom ne-United States kulindeleke ukuthi kulethe ukusa okusha ekulweni naleli gciwane futhi kamuva kube nentuthuko embonini yezokuvakasha neyokwamukela izihambi.
Ochwepheshe kulo mkhakha baphinde babone ukululama kuncike ekhonweni lokuzivumelanisa nokujwayelekile okusha lapho idijithali ikhula ngokushesha, isekela ukusebenza kude. Laba baphikisana ngokuthi ubuchwepheshe bungenye yezindlela eziyinhloko zokuthonya umkhakha wezokuvakasha ngo-2022 futhi ukuhambisana, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe kuzoqhubeka nokweseka abaphathi bezokuvakasha ekwenzeni izakhiwo zabo zisebenze kahle.
Ezinye izindaba ngeZimbabwe
Covid-19 Ubhubhane lwe-COVID-19 Tanzania Ezokuvakasha i-United Kingdom I-united states Zimbabwe